» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु भाग २८ (भिडियो)
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु भाग २८ (भिडियो)
६ श्रावण २०७७, मंगलवार १४:२७
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ६ साउन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को काठमाडौँ अडिसनबाट ३५ जना प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । उनीहरुमध्ये २९ जनाका बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा चर्चा गरिसकेका छौँ । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिन तयार पारिएको भिडियो सिरिजको यो २८ औँ भाग हो । यस भागमा काठमाडौँ अडिसनबाट छानिएका बाँकी ६ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा लावनी चक्रवर्ती प्रसाई, विश्व शान्त राई, पूर्ण बिक, प्रेम जिमी, सोनाम राई र समिक्षा दाहालका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
३०) लावनी चक्रवर्ती प्रसाई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएकी तिसौँ प्रतियोगी हुन् लावनी चक्रवर्ती प्रसाईँ । झापाको सुरुङ्गा निवासी लावनीको माईतिघर कलकत्तामा हो । आफ्नो बुवालाई संगीतको पहिलो गुरु मान्ने लावनी अझै संगीत सिक्दैछिन् । अल ईण्डिया रेडियोमा कार्यक्रम समेत गर्ने अवसर पाएकी लावनीले उक्त रेडियोमा भएको प्रतियोगितामा ६ पटक अवार्ड समेत जितेकी थिईन् । झापाका प्रमोद प्रसाईसँग २ वर्षअघि विवाह गरेकी लावनी आफ्नो श्रीमानको सहयोग निरन्तर प्राप्त भईरहेको बताउँछिन् । लावनीका केही नेपाली ओरिजिनल गीतका साथै कभर गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनले अडिसनमा राग गाएकी थिईन् । राग गायनमा निर्णायकको प्रशंसा पाएकी लावनीले त्यसपछि ‘साउने झरीमा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । दोस्रो गीतमा पनि थप प्रशंसा पाउँदै लावनीले दोस्रो राउण्डमा प्रवेश पाएकी हुन् ।
३१) विश्व शान्त राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका एक्तिसौँ प्रतियोगी हुन् विश्व शान्त राई । धरान निवासी विश्वशान्त विभिन्न सांगितिक जमघटहरुमा व्यस्त हुने गर्छन् । उनका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । उनी अभिनय र नृत्यमा पनि सोखिन छन् । उनले अडिसनमा ‘हिँड्दा हिँड्दै’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले गायक रामकृष्ण ढकालको ‘ओराली लागेको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
३२) पूर्ण बिक–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका बत्तिसौँ प्रतियोगी हुन् पूर्ण बिक । उनले अडिसनमा ‘मखमली पछ्यौरीले सानु’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
३३) प्रेम जिमी–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका तेत्तिसौँ प्रतियोगी हुन् प्रेम जिमी । उनले अडिसनमा ‘बैगुनी रैछौ’ बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले ‘पर्खि बसेँ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले तेस्रो पटक ‘झुपडीकी नारी रुन्छे’ बोलको गीत गाएका थिए । संखुवासभा आईडल समेत भईसकेका प्रेमलाई सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएको हो ।
३४) सोनाम राई–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएका चौँतिसौँ प्रतियोगी हुन् सोनाम राई । उनले अडिसनमा ‘हिँड्दा हिँड्दै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
३५) समिक्षा दाहाल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि काठमाडौँबाट छानिएकी पैँतिसौँ प्रतियोगी हुन् समिक्षा दाहाल । ईलामको फिक्कल निवासी समिक्षा अहिले काठमाडौँमा बस्छन् । काठमाडौँमा बस्दै गरेकी समिक्षाले बिगत एक वर्षदेखि संगीत सिक्दैछन् । सानैदेखि गाउन सुरु गरेकी समिक्षाले काठमाडौँमा आएर पनि गाउन छोडिनन् । उनले गाउँदा साथीहरु पनि उनलाई सपोर्ट गर्थे । उनी नेपाल आईडल सिजन २ को थिएटर राउण्डसम्म पुगेकी थिईन् । उनी उत्कृष्ट १२ छनौटका क्रममा बाहिरिएकी थिईन् । केही कभर गीतहरु समेत गाएकी समिक्षाले अडिसनमा ‘तिमीलाई कुनै पल’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनले दोस्रो पटक ‘हेर न तिमी र म’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनलाई सोही गीतहरुबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएको हो । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।